Khanada - ALinks
ukuhamba, ukuhlala, ukusebenza, ukufunda eCanada
January 17, 2022 UMaitri Jha Khanada, isifundo, ivisa
Uyifumana njani i-visa yokusebenza eCanada?
January 8, 2022 UMaitri Jha Khanada, ivisa
Ukuba uvela kwelinye ilizwe, uya kudinga imvume yokusebenza eCanada ukuze usebenze eCanada. Ukuze usebenze eCanada, uhlala ufuna imvume yokusebenza. Kwiimeko ezithile, unokusebenza eCanada ngaphandle kwevisa okanye a
January 8, 2022 UAntika Kumari Khanada, impilo
ICanada inezibhedlele ezilungileyo, ngakumbi eMontreal naseToronto. Ngaphaya koko, izibhedlele zaseCanada ngamanye amaxesha zinokusebenza kunye neenkonzo zononophelo lweedatha zokuqesha ukubhukisha. Ewe, phantse kuzo zonke iimeko iinkqubo zifuna inani lokuchonga laseCanada. Izibhedlele eziphambili eCanada zezi: iToronto Jikelele
Ungayifumana njani indlu oza kuyirenta eCanada?
January 5, 2022 UAntika Kumari Khanada, izindlu
ICanada lilizwe lesibini ngobukhulu emhlabeni ngokommandla womhlaba ke akufuneki ube nexhala lokuba uza kuhlala njani apho. Emva kokufudukela eCanada, uyakufuna indawo yethutyana ukuze uphile ukuze ukwazi ukuthenga i
Ungawufumana njani umsebenzi eCanada? Iindawo zemisebenzi eCanada
Disemba 16, 2021 UAntika Kumari Khanada, imisebenzi
Imisebenzi yaseCanada ibonelela ngamathuba kubantu bamanye amazwe abanomdla wokuza eCanada basebenze. Umsebenzi kunye neNgqesho eCanada ayonto inzima kakhulu; ungalifezekisa ngokukhawuleza iphupha lakho. ICanada inoqoqosho olungileyo kunye namathuba amaninzi
Amazwe asimahla eVisa eCanada
Novemba 22, 2021 UMaitri Jha Khanada, hamba, ivisa
Mangaphi amazwe anokundwendwela eCanada ngaphandle kwevisa? Zicingele ithamsanqa ukuba ubambe ipasipoti yaseKhanada! Ngaphandle kwevisa, ungandwendwela ukuya kumazwe ali-140. Ipaspoti yeyona ndlela isetyenziswayo yokuchaza
Ungasifaka njani isicelo seVisa eCanada?
Novemba 15, 2021 IShubham Sharma Khanada, ivisa
Abantu baseMelika, abantu baseMexico, kunye nabanye abantu abavela kumazwe aliqela anengeniso ephezulu (jonga uluhlu olungezantsi) abafuni visa ukuba batyelele eCanada; endaweni yoko, kufuneka bafumane i-Electronic Travel Authorization (eTA) enokufumaneka kwi-intanethi. Wonke umntu uya kufuna i-visa
indlela yokufumana umsebenzi olungileyo ecalgary?
Oktobha 29, 2021 UAntika Kumari Khanada, imisebenzi
Hamba ngasentshona, ulutsha ofuna umsebenzi, kwaye ngokuqinisekileyo uya kuphelela eCalgary. ICalgary inolunye loqoqosho olukhula ngokukhawuleza eCanada, kwaye ngesizathu esihle. Ngemisebenzi emitsha eyi-136,000 eyongeziweyo phakathi kuka-2010 no-2018, oku kuyinzuzo